‘केएमसीले चिकित्सा सेवामा विश्वव्यापी उत्कृष्ठ सेवाहरू थप गर्ने याेजना बनाएकाे छ’ - Action Khabar - Nepali Online News Portal
काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) मा नयाँ व्यवस्थापन आएसँगै त्यहाँको स्वास्थ्य सेवा दिनप्रतिदिन उच्चस्तरको हुँदैछ । विराटनगर स्थित नोवेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुनिल शर्माले केही समय अघि मात्रै केएमसीको नेतृत्व संहालेका हुन् ।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा नेपालमै नाम कमाएको केएमसीको स्वास्थ्य सेवा कस्तो छ ? आगामी दिनमा केएमसीमा के कस्ता नयाँ सेवाहरु थप हुँदैछन् ? अस्पतालमा उपलब्ध सेवा, भावी योजना र चुनौतीबारे केएमसीकी अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. अर्पणा न्यौपानेसँग एक्सन खबरका लागि लक्ष्मी चौलागाईंले गरिएको कुराकानीको संक्षेपः
प्रा.डा. अर्पणा न्यौपाने निर्देशक, काठमाडौं मेडिकल कलेज
पहिलो चरणको कोरोना महामारी अन्त्य भएको तथा दोस्रो लहरको हल्लासँगै अस्पतालको गतिविधि कसरी चलिराखेको छ ?
कोरोना समय मध्यतिर भन्दा अस्पताल सामान्य अवस्था गइसकेको छ । कोरोनाको त्रासका कारण त्यस समयमा घट्दो अवस्थामा रहेको बिरामीको चाप बढिरहेको छ । अहिले सर्वसाधारणमा पनि कोरोनाको त्रास हराइसकेको हामी अनुमान गर्न सक्छौं । भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै बिरामी संख्यामा लगाम लगाउने नीतिले हामीले बीचमा केही साता फिभर क्लिनिक बन्द पनि गरिसकेका थियौं । फेरि बिरामीहरुलाई पर्न गएको असुविधाको मध्यनजर गर्दै हामीले फेरि फिभर क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याएका छौं।
अस्पतालमा आउने बिरामीको संख्याको आधारमा अस्पताल पुरानै अवस्थामा आइसकेको हो?
कोरोना काल भन्दा पूर्वको अवस्थामा बिरामी अहिले नै आइ नसकेको भएतापनि विस्तारै अस्पताल बिरामी संख्याको आधारमा विस्तारै पूर्ववत् अवस्थामा आउने क्रममा छ । अस्पतालबाट दैनिक रुपमा सर्जरी सेवा लिने बिरामीको संख्या सामान्य अवस्थामा आइसकेपनि ओपिडीमा आउने बिरामीको संख्या भने अझै पनि पहिलाको अवस्थामा आइसकेको छैन ।
अस्पतालमा दैनिक २५–३० वटा सर्जरी हुने गरेको छ । भने करिब १२ –१५ सय बिरामीले ओपिडीबाट सेवा लिने गरेकाे मेरो अनुमान छ । कोरोना समयपूर्व अस्पतालले दिने गरेको सर्जरी सेवा अहिले पनि प्रदान गरिरहेको छ । ओपीडीमा आउने बिरामी संख्या भने अझै पनि पूर्ववत अवस्थामा फर्कन सकेको छैन । अहिले ओपिडीमा आउने बिरामीको संख्या लगभग ८ सयको हाराहारीमा छ। कोरोना समयमा बन्द भएका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरु अस्पतालले प्रदान गर्न थालेकाे छ ।
अहिले अस्पतालले कुन –कुन विभागबाट स्वास्थ्य सेवा दिदैं आइरहेको छ ?
कुन कुन सेवा भनेर तोक्नु भन्दा पनि एउटा अस्पताल तथा रेफरल सेन्टरले प्रदान गर्ने सम्पूर्ण सेवाहरु काठमाडौं मेडिकल कलेजले दिदैं आइरहेको छ । त्यसमा हाडजाेर्नी सम्बन्धी सेवाहरु, क्रिटिकल केयर, इमरजेन्सी, हरेक प्रकारका सर्जरी जस्तैः यूरो सर्जरी, पेटसम्बन्धी सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी लगायतका सर्जरी सेवा अस्पतालले सर्वसुलभ रेटमा प्रदान गर्दै आएको छ ।
अस्पताल सञ्चालन भएको २ दशक बढी भइसक्यो हामीले प्रदान गर्ने हरेक सेवाहरु उत्कुष्ट छ भन्ने दाबी गर्न सक्छु । त्यसमा पनि सर्जरी , मेडिसिन तथा क्रिटिकल केयर लगायत अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवाहरु अझै उत्कृष्ट छन् । काठमाडौं कहीँ कतै क्रिटिकल केयर सञ्चालन नहुँदा काठमाडौं मेडिकल कलेजले क्रिटिकल सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
क्रिटिकल केयरका सेवाहरुमा आइसियू, एनआइसियू सेवालाई हामीले मात्रै होइन अरुले पनि राजधानी भित्रकै उत्कृष्ट छ भनी स्वीकार गरिसकेका छन् । हामीले प्रदान गर्ने सेवा उत्कृष्ट भएकै कारण पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले पनि केही दिन अगाडि मात्रै यहिँ बाट सर्जरी गराउनु भएको थियो। पछिल्लाे समय अस्पतालले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न याेजनाबद्ध रूपमा काम गरेकाेले सामान्य देखि विशिष्ट स्तरका सेवाग्राहीकाे आकर्षण बढेकाे छ ।
महिला निर्देशक भएको नाताले अस्पताल चलाउन के कस्ता चुनौतीहरु देख्नुभएको छ ?
म आफूलाई महिला भन्नुभन्दा पनि एक चिकित्सक भन्न रुचाउँछु । चिकित्सक भएको नाताले म आफू महिला हुँ भन्ने बिर्सिन्छु । म आफू महिला सोचेर भन्दा पनि चिकित्सकीय जिम्मेवारी पुरा गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्ने भएकोले मैले गर्ने काम र सेवामा महिला हुनुले खासै प्रभाव पारेको छैन।
अहिले एक चिकित्सक तथा व्यवस्थापक दुवै भएर काम गर्नुपर्दा पनि महिला नै भएको कारणले भने मैलै आजसम्म पनि कुनै चूनौती सामना गर्नु परेको छैन । जसरी व्यवस्थापकको हैसियत एक पुरुष चिकित्सकले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्थ्यो त्यही सहजता मैले आफूमा पाएको छु ।
अस्पतालले तत्कालै केही स्वास्थ्य सेवा थप गर्न लागेको छ कि ?
केएमसी भन्ने वित्तिकै स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा राम्राे सेवा प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा उभिएकाे जगजाहेर छ । पछिल्लाे समय अस्पतालले चिकित्सा सेवामा विश्वव्यापी उत्कृष्ठ सेवाहरू थप गर्ने याेजना बनाएकाे छ ।
अस्पतालले न्यूरो सर्जरी सेवा प्रदान गरि राखेको छ । तर, हामीले प्रदान गरिराखेको न्यूरो सर्जरी सेवा केही सेवाहरु अपुग छ भन्ने ठानेर अब छिटै नै अस्पतालले अत्याधुनिक यन्त्र उपकरण जुटाएर विश्वस्तरकाे न्यूरो सर्जरी सेवा प्रदान गर्ने याेजना अगाडी सारेका छाैं ।
आगामी ६ महिनाभित्रै त्यस प्रकारको सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य हामीले लिएका छौं । अस्पताललाई न्यूरो सर्जरी सेवामा मुलुककै सर्वाेत्कृष्ट सेन्टर बनाउने लक्ष्य हाम्रो छ । त्यसैगरी भइराखेको मुटु रोग सेवा तथा डाइलाईसीस सेवालाई थप विस्तार र सुविधासम्पन्न बनाउने योजना रहेको छ ।
बिरामीको रोजाइमा काठमाडौं मेडिकल कलेज नै किन पर्छ ?
काठमाडौं मेडिकल कलेज बिरामीको रोजाइमा पर्नुका विभिन्न कारणहरु मध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेकाे हामीले प्रदान गर्ने सेवा उत्कुष्ट हुनु हो । यहाँका चिकित्सकहरुले अपनाउने उपचार विधी एकदमै प्रभावकारी छन् । यहाँ कार्यरत चिकित्सक, अनुभवी, विरामीमैत्री, बालमैत्री रहेका छन् । नर्स, अस्पतालमा रहेका अन्य कर्मचारीहरूले पारिवारिक वातावरणमा विरामीहरूकाे स्वास्थ्य सेवा र हेरचाह गर्नुहुन्छ ।
यहाँ चिकित्सकहरुको उपचार विधीको नक्कल अन्य अस्पतालका चिकित्सकहरुसमेत गर्छन्। शुल्कको कुरा गर्नुपर्दा काठमाडौ मेडिकल कलेजको शुल्क अन्य अस्पतालको भन्दा सर्वसुलभ छ । हामीले केएमसीलाई व्यवसायीक रूपमा भन्दा पनि सेवामुलक संस्थाका रूपमा स्थापित गरेका छाैं । निजामती अस्पतालको शुल्क जस्तै यस अस्पतालको शुल्क पनि निम्न वर्गीय मानिसहरुलाई मध्यनजर गरी निर्धारण गरिएको छ । पछिल्लाे समय केएमसी नयाँ व्यवस्थापनमा आएसँगै अस्पतालले ओपीडी निःशुल्क गरेकाे छ ।
ओटी तर्फपनि अन्य अस्पतालको भन्दा हाम्रो सेवा गुणास्तरीय र सर्वसुलभ छ । हामीले बिरामीलाई घर परिवारमा रहेका नजिकका व्यक्तिको जस्तो व्यवहार गर्छौं । बिरामीसँगको मित्रवत व्यवहार गर्न, कुराकानीका लागि अस्पतालको एउटा समुह नै जुटेको हुन्छ ।
त्यसैगरी अस्पतालले उपचारका लागि आएका बिरामीहरुलाई तुरुन्तै सेवा दिने गरेको छ । सहज उपचार पाउने भएकोले काठमाडौं मेडिकल कलेज सबै प्रकारका बिरामीको रोजाइमा परेको छ।
- २२ चैत्र २०७७, आईतवार १६:२० मा प्रकाशित
Interview Neupane KMC hospital Director
२९ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०९:३१